600 Deg Deg Daawo::Kismaayo Lagu Toogtay Askari Shalay Toogtay Askari kale | khaatumo news online
Deg Deg Daawo::Kismaayo Lagu Toogtay Askari Shalay Toogtay Askari kale
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maanta u fariisatay dhagaysiga gal dacwadeed eed loo haysto Cabdirashiid Cabdinaasir oo lagu soo eedeeyey dil fiidnimadii xalay ahayd ka dhacay magaalada Kismaayo.
Eedaysanahay ayaa lagu eedeeyay dilka marxuum Maxamuud Maxamed Sheikh Cabdulaahi oo isaguna ahaa askari ka tirsan ciidankailaallada madaxtooyada Jubbaland.
Gudoomiye ku xigeenka maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawlad goboleedka Jubbaland gaashaanle dhexe Bashiir Maxamuud xareed ayaa go’aanka maxkamada warbaahinta u akhriyey dhagaysiga dacwaddan kadib.
Gudoomiye ku xigeenka maxkamada ayaa sheegay in kadib markii maxkamadu ay dhagaysatay markhaatiyadii goobta la keenay iyo sidoo kale eedeysanaha oo fursad loo siiyey in su’aalo laga weydiiyo sida uu dilka u dhacay ay maxkamadu soo saartay go’aan ah in dil toogasho ah lagu fuliyo Cabdirashiid Cabdinaasir Aaden.
Xukunka maxkamadda ayaa barqanimadii aanta ahayd lafu fuliyay eedaysanaha waxaana loo qisaasay marxuum Maxamuud Maxamed Sheikh Cabdulaahi.